अर्जुनधाराको क्वारेन्टिनमा योग, ध्यान र प्रवचन - Speak Corner
प्रतिनिधि सभा सदस्य निरौलाद्धरा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
सलहबाट हुने क्षतिका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले ल्यायो कृषक उत्साहित कार्यक्रम २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
मेची चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्षमा बोहोरा २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
कुन जिल्लामा कति भेटिए कोरोना संक्रमित? २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच तीन घन्टा वार्ता २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
शिक्षकहरु आन्दोलित २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
दुई वडाका स्थानीयबिच झडप २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
बम्जनलगायत तीन जनालाई प्रतिवादी बनाई अदालतमा मुद्दा दर्ता २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
आत्महत्या गरेका पुरुषको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
बालिकाको अर्धनग्न अवस्थामा शव भेटियो २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
अर्जुनधाराको क्वारेन्टिनमा योग, ध्यान र प्रवचन
कभर स्टोरी २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:००
बिर्तामोड– एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास, अर्कातिर घर परिवारको सम्झना । क्वारेन्टिनमा बस्ने धेरैले मानसिक रुपमा भोग्ने समस्या हो यो । अझ अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको बसाईले धेरैलाई...
बिर्तामोड– एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास, अर्कातिर घर परिवारको सम्झना । क्वारेन्टिनमा बस्ने धेरैले मानसिक रुपमा भोग्ने समस्या हो यो । अझ अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको बसाईले धेरैलाई मानसिक र शारीरिक तनाव दिएको छ । तर, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु भने यी सबै समस्याबाट मुक्त छन् ।
नगरपालिकाले उनीहरुको क्वारेन्टिन बसाईलाई सहज बनाउन दैनिक योग अभ्यास र प्रवचनका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । क्वारेन्टिनको बसाईलाई पट्यारलाग्दो हुन नदिन नगरपालिकाले बिहान बेलुका योग, ध्यान र प्रवचन गराउन थालेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुकुन्द बस्नेतले बताए ।
क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु बिहान सबेरै उठ्छन् । नित्यकर्म सक्दा नसक्दै अर्जुनधारा जलेश्वर धामका व्यासाचार्य अग्निप्रसाद सिग्देल प्रवचन दिन क्वारेन्टिन स्थलमा आइपुग्छन् । सकारात्मक सोचको विकास र प्रकृति मानव सम्वन्धका विषयमा सिग्देलले नियमित प्रवचन दिन्छन् र सहभागीलाई ध्यान गर्न लगाउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा आहार विहारको एकदमै महत्व छ’, व्यासाचार्य सिग्देलले भने, ‘योग र ध्यानले मानिसमा आत्मविश्वास पैदा गर्छ ।’
क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई साँझ योग सिकाइन्छ । विद्यालयको फराकिलो मैदानमा उनीहरु आउँछन् र योग अभ्यास गर्छन् । योग गुरु डा. रमेश पोखरेलले उनीहरुलाई योग सिकाउँछन् । योगले शारीरिक तथा मानसिक थकान मेट्ने भएकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु योग सिक्न लालयित हुन्छन् ।
नगरपालिकाको क्वारेन्टिन व्यवस्थित हुनुका साथै खानपनिको राम्रो प्रवन्ध भएकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुले असहज महसुस गर्नु परेको छैन । बिहानदेखि बेलुकासम्मको कार्य तालिका बनाएर नगरपालिकाले उनीहरुलाई आत्मविश्वास जगाउने गरी काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाको व्यवस्थापनप्रति आफूहरु सन्तुष्ट रहेको स्थानीय सुनिता राईले बताइन् ।
क्वारेन्टिनमा बसेर समय कसरी बिताउने भन्ने धेरैको चिन्ताका बीच अर्जुनधारा नगरपालिकाले सुरु गरेको योग अभ्यास, ध्यान र प्रवचनको कार्यक्रम अरु पालिकाहरुका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ ।